I5 BEST ZVAUNOFANIRA Zvikonzero zvekuzarura Aunti yeAgasitore
Zvinonzi 5 Zvikonzero Zvakanakisisa Zvokuzarura Aunti yeBanternet Bank
Izvo zvepamusoro 5 zvikonzero zveaccount yekubhangi account inotevera:
Kupa mararamiro ekuchengetedzwa kwematambudziko kubva kumhosva
Gadzirirai mararamiro emarudzi akawanda
Mabhandi akasimba (ona pasi apa nokuda kweuchapupu)
Zvese zvezvikonzero izvi ndizvo zvekutanga hwaro hwehutano hwemari portfolio. Iko hakuna chinhu chitsva nezve ruzivo urwu. BUT, tanga kuunganidzira zvinhu zvekutanga zvemari yako pachako nematareji-anofara mamiriro ekunze. Wobva watarisa mamiriro epasi nhasi. Muchiedza icho, iyo 5 zvikonzero zvikuru nei offshore banking yakakurumbira ichaita pfungwa yakawandisa.
"Kana pane shoko rimwe chete ndinoda kukusiya naro nhasi, ndizvo izvi ... Glocal." -Natalie Keener anobva mufirimu Kumusoro Mumhepo
Zvekare 5 Zvikonzero zveAxplore Banking
1. Ipa Asset Kudzivirira
IUS inongova ne4.4% yehuwandu hwepasirese. Zvinotyisa, zvakadaro, ine 80% yeaipi magweta epasi uye 96% yematare ese epasi. Kufanana nemamiriyoni evaAmerican, iwe unosangana nenjodzi yematare edzimhosva mazuva ese. Semuenzaniso, iwe unofumurwa nguva imwe neimwe yaunopinda mumotokari yako uye uchityaira. Nguva imwe neimwe yaunotora iwe mutsva mutengi iwe unozviverengera pachavo kune magweta emagweta. Nguva dzose kana mumwe munhu akafamba achiyambuka nepfuma yako, aine mvumo yako kana kwete, zvinogona kukonzera kurwa kwakashata pamutemo.
Ramba uchifunga, vanhu venyama ndivo vanonyora mitemo. Haisi imwe yakanaka uye ingori simba mudenga. Zviyeuchidze zvakare nezvekugara kwevaya vanonyora mitemo. Vezvematongerwo enyika. Vazhinji vava magweta. Uye pavanonyora mitemo, iwe unofunga kuti vanoinyorera here kana kupesana nebasa ravo pachavo? Saka, chatinofanira kufunga ndeichi. Chero chinomisa mirawu mukufarira kwegweta kuwana maoko muhomwe mako, achingonyara neruzhinji mutinyu, ndiyo nzira iyo yedare reparamende yakanyora iwo mitemo. Vagadziri vemitemo havana kunyora mitemo ne “kurongeka” seicho chinangwa chikuru. Mirairo mizhinji inonyorerwa na, uye nerubatsiro rwe, nhengo dzevashandi vepamutemo.
Isu taimbove nemutengi waichimbova akapfuma uyo airohwa zvachose nechuru chematare. Aive a nhengo yebhodhi revatungamiriri kubhengi. Mumwe wevashandi vake, mubhizinesi rake guru, akakurudzira iyo kubhengi kune mutengi wayo. Watinoshandira mutengi wedu haana kutaura kuti mutengi wedu aivawo director webhengi. Bhangi parakakundikana kuita zvivakwa mutengi akamhan'arira mutengi wedu kuti abiridzire.
Vakamhan'arira nekuda kwekusaziva kwemushandi wake mukutadza kumuudza nezve nzvimbo yemutengi wedu nebhangi. Inishuwarenzi yake yakaramba kumudzivirira nekuti mhosva yaisanganisira izwi rekuti "hunyengeri." Bhanga harina kumubhadhara chero chinzvimbo chake. Nekudaro, Dare Repamusoro reCalifornia rakangosimbisa mutongo we $ 2 + yemiriyoni kupokana nemutengi wedu. Neraki kwaari, tinoisa chirongwa chekudzivirira chinhu.
Mushure memakore mashanu ekurwa, akasarudza kubhuroka. Iye achangobva mukuzvikudza akaisa mwanasikana wake kuburikidza koreji uye akange atsigira mudzimai wake, mwanakomana uye amai vanorwara. Kwete chete kuti Gweta raishanda senge bankruptcy trasti akamubvisa zvese zvisina kusungwa. Akamhan'arira mukadzi wake, vana naamai. Akavamhan'arira chero rutsigiro rwavaive vagamuchira kubva kwaari mukati memakore mana apfuura.
Hongu, mubati webhangi akamhan'arira mwanasikana wake mari yaakabhadharirwa nababa vake kukoreji, imba, chikafu, nezvimwe. Chaizvoizvo zvakajeka. Kwakanaka here kuti vanogona kumhan'arira mwanasikana wake ivo pachavo mari iyo vabereki vake vakabhadhara kudzidzo yake? Pamwe mubvunzo wakanaka, ndewekuti, "Ndezvipi zvisingaiti izvo magweta avanisa maoko muhomwe dzemumwe munhu?" Kubvunza mubvunzo uyu kunowanzo kukuudza nzira yakanyorwa nemutemo. Oo, nenzira, Gweta rinoshanda semubhangi trastii rakawana chetatu chezvakapambwa.
Kusiyanisa kwakanyorwa mumitemo yanhasi kuri kuita sekudhindwa kwakanaka kwechibheti uye chinja scam. Isu takazviona kakawanda kana vatengi vachidana nenhau dzinotambudza. Magweta anogona kazhinji kuunganidza katatu kukanganiswa pamwe nemahara emagweta. Vanogona kudaro kana vachigona kugonesa mutongi waRobin Hood kuti pakanga paine inkling yekunyepera. Semhedzisiro, ivo vanowanzo kukanda mumutsara kana maviri nezvekunyengedza mumatare, zviri pamutemo kana kwete.
Saka, zvisinei nebasa rako, chokwadi chimwe ichi. Ronga pane kusagadzikana kana zvasvika kune uyo achakumhan'ara iwe unotevera. Vhura account yeofficial. Bata iyo account mu asset protection trust kana kambani. Iko kusanganiswa kunogona kukupa iwe nzira yekuchengetedza mari yako. Unogona kurara zvine mutsindo usiku uchiziva mhirizhonga yepamutemo mamiriro haigoni kukukanganisa.
Ko kana mumwe munhu akamhan'arira iwe uye mhosva yacho ikasunungura maakaundi ako ose emubhengi eUS? Mari ipi yaungashandisa kuzvidzivirira? Ungabhadhara sei mabhiri ako? Tine shamwari yemushandi wekambani uyo anoita basa. Kunze kwebhuruu, masangano ehurumende akauya akamusunga iye nevatanhatu vavashandi vake. Pashure pazvo, ivo vanobvisa maakaundi ake ose ebhengi; zvese zvekubhadharwa kweinishuwarenzi kwevashandi vadiki. Ivo chaizvo vaive vasina zano rekuti pane chavaitadza.
Akaita mamirioni emadhora pagore. Nekudaro, haana kana kunyatsogadzirira kuwana mari yekuzvikumbira. Izvi hazvitauri kuti iye aive asina kana mari yekushandisa mari yegweta kuti amudzivirire. Vatongi veAmerica havana mvumo yekuisa macamps epamberi pemari maakaundi mune dzimwe nyika. Izvi zvinonyanya kuitika kana bhangi risingaenderane nemapazi eUS; kunyanya kana ukabatwa zvakafanira kumahombekombe trust.
Kuve nemari kumhiri kwemakungwa kunopa iwe simba rekudzivirira munhu kubva kukubiridzira nekutsikirira kwegunwe. Zvinogona kubatsira kudzivirira muvengi wepamutemo kana mukuru anopfuura muhofisi kuti areve nhema kwauri. Pasina chidziviriro ichi, vangangoerekana vaburitsa rugure kubva pasi pako, vachimanikidza iwe kuti unowira pasi pavo. Iyo inoisa iwe mukutonga uye inobatsira kuchengetedza iwe mune mutyairi chigaro chemari yako yakaoma-yaunowana.
Zvimwe Zvisarudzo Zvekudyara
Pane imwe tsamba, iwe unogona kunge uri kumberi kwemari yemari. Iwe unogona kunge uri kana iwe uchitsvaga nzira dzekudyara nedzimwe nzira dziri nani dzekushandisa mari yako. Uye, zvakanyanya kupfuura zvingangoitika, iwe unogara uchiburitsa nhau senge: CNN, MSNBC, Fox, Bloomberg kana YouTube. Unogona kuvaona vachichengeta maitiro ezvehupfumi uye mamiriro emusika wekutengesa.
Vakuru vatambi vemari vakaita saWarren Buffett, George Soros, uye, Dr. Michael Burry (Muvambi weScion Capital, LLC) vaive vashoma chete vekufungidzira kwekutadza kwedzimba kwe2008 US. Vanga vachiratidzira kunyevera nezvedambudziko rakakura rekudzikira uye kudonha kwedhora reUS. Parizvino vanoti iri kuuya, asi havazive kuti ndirini.
Iwe unogona kunge uchitoziva kuti Buffett naSoros vanga vachitora mari kunze kweAmerican Banks kwehuwandu hwemakore. Iwo mabhengi ekudyara haana kudzidza zvakawanda kubva pamakaro uye hunyengeri hwavakaitira vanhu veAmerica. Uyezve, ivo vanozotarisira imwezve chikwereti chemari. Panguva ino, zvinogona kwete kuve chikwereti nehurumende yeUS nekuti hurumende yeUS inogona kunge isina mari yekupa.
America ndiyo nyika ine chikwereti chikuru pasi pano. Chikwereti chikamu ndicho chakakwirira chakakonzerwa nenyika ipi zvayo munhoroondo yenyika. Ichokwadi, kune mawebsite apo iwe unogona kutarisa iyo Chikwereti che US munguva chaiyo. Nyanzvi dzinofanotaura kuti huwandu hwemari uhwo hwaitadza kana kubhadharwa mumakore e40. Vazhinji vedu tinofanira kutarisana nechokwadi chakapusa chekuti tinoshaya ISDA Trading Chibvumirano saka tinogona kuvanzika kune zvakavanzika zva vakomana vakuru. Saka, chinotevera chinhu chakanakisa chatingaite isu kuchengetedza mari yavo mune offshore account.
On Global Finance's most most report, inonzi, "The World's 50 Safeest Banks," hapana mazita makuru eUS mabhangi akatoita rondedzero-isina imwe. Kunze kwemabhangi e50 United States chete iine matatu pane iyo chinyorwa. Matatu madiki madiki-ezvirimwa akachengetedzwa mumabhangi akanyorwa ku #30, #45 uye #50 ndiyo chete iyo mabhangi eUS akagadzira. Pane chirevo chinoshandiswa nevamwe pamwe chete nemabhangi makuru eUS kutsanangura irikuitika iro chiitiko chinofungidzirwa kuti chiitike: Zvakakura kwazvo kutadza. Izvi hazvingagone kupfuurira mberi kubva pachokwadi.
Rimwe chete mabhenji anotanga kuva insolvent (asingakwanisi kubhadhara chikwereti) nekuda kwechikwereti chakashata uye kusina nzvimbo yekutsvaga nguva ino yehurumende yekubhadhara mari, mari muzvikwereti zvako icharasika. Yaenda.
Iwo mabhangi anoshandisa mari yako kubhadhara chikwereti chayo. Kungofanana nezvakaitika munguva pfupi yapfuura muGreek, mabhangi achavhara. Mushure meizvozvo, iwe haugone kutora mari kubva kuATM nekuti panenge pasisina mari. Mumwe anogona kutaura zvisizvo achiti, "Ehe asi kana ndikaisa mari yangu uko, zvimwe zvikaitika?"
Ndimo matinopinda. Isu tinotsvaga iro rakasimba kwazvo, rakachengeteka mabhanga epasi rose uye tinopa kwakawanda kurudziro maererano nehupfumi data ravo. Mabhangi haangobhururuka kubva kune "akachengeteka kwazvo pasi" rondedzero kuenda kune insolvency mune nanosecond. Asi ko kana munhu akabata mari mubhangi kwete pane "yakachengeteka" rondedzero? Zvino ko kana bhanga riri mune zvakanyanya-chikwereti nyika munyika? Zvino, icho chikonzero chekunetseka chaiko.
Njodzi Pamberi: Tora Kuvhara Offshore
Vazhinji vatambi vakuru vezvemari uye vezvehupfumi vanonyevera nezve dhora rinowira pasi. Uku kudonha kunokonzerwa nehuwandu hwe nyeredzi hwechikwereti, kudhonza kwemitengo yemafuta pahupfumi hwedu uye inflation. Maererano ne Thomas Metcalf, nyanzvi yezvehupfumi, stockbroker uye mubatsiri wekunyora webhusaiti yepaIndaneti, Zacks, "The Federal Reserve's target rate for inflation is 2 percent. Apo kuwedzera kwepasi kwakawira pasi pezvakatarisirwa uye hakuna kuratidza zviratidzo zvekuunganidza, Federal Reserve uye vazhinji vezvematongerwo enyika vakaratidza kunetseka kwakanyanya. Nekuda kwekuwisira pasi kwekuwisira, iwe haugone kubatsira asi kubvunza chii chinoitika kana icho chichidonha pasi pe zero. Ndiyo economists 'inonetseka. "
Isa mari yako munzvimbo yakachengeteka, iyo isiri mubhadha, guru reUnited States uye kwete US broker broker, kazhinji akasungirirwa pedyo neBhangi reUnited States. Paradzanisa chikamu chemari yako mune yakachengeteka, pamutemo, offshore account mune rimwe remabhangi akachengeteka kwazvo epasi.
4. Yakaderedzwa Kutadza
Usamboisa mazai ako ese mudengu rimwe. Kana iwe uchidaro, iwe unowedzera zvakanyanya mikana yako yekurasikirwa nemari yako uye nekudyara. Saka, kana iwe uri mune basa raunogona kumhan'arwa chero nguva, ipfungwa yakanaka kuendesa imwe nzvimbo kunzvimbo yakachengeteka uko isingakwanise kubatana newe. Kana iwe wakaroora, kana iwe usina kuroora uye uine mhuri kana iwe uchingo fambira mberi funga, kuisa mari kune dzimwe nyika inzira yakangwara yekudzora kusagadzikana kwako kwemari.
Chokwadi, tinoda uye tinoriritira nhengo dzemhuri yedu. Nekudaro, izvo hazvireve kuti tinofanirwa kushandisa nhaka yedu kubhadhara zvese zvikwereti zvavo kana vangozvipfuudza. Nhengo dzemhuri dzakapona dzinotakura mutero wekubhadhara chikwereti chemudiwa wako-mudiwa nezvinhu zvemufi. Kugovera mari yemhuri muakaundi yekumhiri kwemakungwa, inochengeterwa neruvimbiko rwemhiri kwemakungwa, kunogona kuchengetedza kodzero yako yekuzvarwa kuti isadzimwa mushure mekufa kwemudiwa.
5. Rugare rweMangariro
Usaenda nechombo chinonyura.
Doug Casey, munyori wezvemari uye mutengesi wezvematengesi akasununguka akaita zvakaenzana zvakadzama pakati pe (kuwa kwe) US uye kuwira kweMambo hweRoma. Casey akati, "Hatigoni kudzivisa mutemo wechipiri we thermodynamics, unobata kuti entropy inokunda zvinhu zvose uye kuti nokufamba kwenguva masangano ose anoninipisa uye anobva pasi. Uye kuti zvakanyanya kuoma sarudzo inova, inowedzera simba rinotora kuti rirambe riripo. Iyo yakakura uye yakaoma kwazvo, inopindirana, uye inopindirana inosvika, inonyanya kuitika ndeyokuparara uye kukanganisa kwakaipisisa. Izvo zvinosanganisira nyika uye mararamiro. "
Kana, tinogona kudzokorora boka remhanzi rakakurumbira, Ropa, Tsvuku uye Misodzi, "Zvinokwira kumusoro zvinofanira kuburuka."
Iko kune 2009 bhaisikopo inozivisa George Clooney, ane zita Kumusoro Mumhepo. Mariri, mudiki, anoda chinzvimbo, mutambi, Natalie Keener, anoridzwa naAnna Kendrick akataura nezvezita rekuti "glocal." Vakuru vaAnna, kusanganisira Mr. Clooney, vanokatyamadzwa neizwi iri. Anna anobva atsanangura kuti "global" ishoko rinyowani rinoshandiswa kurondedzera kubatana kwemusika wepasi rose uye wepamusha.
Glocal inoratidza kuti nyika iduku duku nekuda kwekombiyuta, kutengeserana kusununguka uye yebhizinesi rega rega. Zvichida famba pa ngoro uwedzere mazamu ako, kana kusara shure. Kuva nemafungiro ehupenyu mumazuva ano uye nemakore hazvisi kutema miviri-zvakare. Offshore banking inopa hutano hunokosha uye hune nzira dzakanakisisa dzekuwedzera hutori hwemari yako.
Pave nekunyengera kwakanyanya, hunyengeri, kunyengera uye kuba nemasangano emabhangi eUS. Izvi ndizvo zvakaitikawo kune vatengesi vemusika wemasheya uye iyo Federal Reserve. Isu takatarisana nemusanganiswa wezvemari zvataurwa pamusoro apa zvemukati uye 'pasi rose.' Izvi zvinobva zvaita iro dutu rakanakisa kweimwe kudonha kwemari.
Fonera iyo nhamba kana yakazara fomu yekubvunza iri peji ino kuti utsigire uye ubatsire. Tsvaga zvako. Zvifunge pachako uye ufunge kunze kwebhokisi-uye-funga kunze kwenyika. Usave mutambudzi weiyo US banking system. Ronga uye ubate imwe yemari yako muaccount yekubhanga account.
To chitsauko 3>